ပျက်စီးသွားသောဆံပင် - ဤအကြံပြုချက်များနှင့်ခြေလှမ်းများဖြင့်ပြန်လည်ရယူပါ။ | Bezzia
Susana godoy | 26/05/2021 12:00 | လှပမှု
ဆံပင်ပျက်စီးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်နေ့တိုင်းရေတွက်သောအရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ရှေ့ဆက်အများအပြားနှင့်အရေးကြီးသောသူတွေကိုအမြဲရှိပါတယ်။ ဆိုးဆေးများ၊ ခြောက်သွေ့သူများသို့မဟုတ်အပူအပူများနှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးတို့ကကျွန်ုပ်တို့အားဤအချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့၊ လက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အတိတ်ကိုကျော်သွားလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်သောကြောင့် ငါတို့ဆံပင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလောင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ပျက်စီးနေသောဆံပင်ပုံသဏ္importantာန်၊ တောက်ပမှုနှင့်သဘာဝအတိုင်းမည်သို့ဖြစ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေ့မြင်လိုသောကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ငါတို့စခဲ့တယ်!
သငျသညျအုပ်စုခွဲကြီးစွန်းနှင့် frizzy ဆံပင်သတိထားမိ.
ထိရန်ကပုံမှန်အတိုင်းထက်သိသိသာသာ rougher ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်လစဉ်လတိုင်းဆေးဆိုးခြင်း (သို့) သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထိတွေ့မှုများပြုလုပ်ရန်လာသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဂရုပြုရမည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိရင်ငါတို့ပျက်စီးခြင်းဟာအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ အဲဒါအတွက် သင်ပြုလုပ်သင့်သည့်ပထမခြေလှမ်းတစ်ခုမှာ၎င်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှများများအားရေဓာတ်ဖြည့်တင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုလဲ? အာဟာရရှိသောမျက်နှာဖုံးများသို့မဟုတ်ထိုထက်ကောင်းသည့်အတွက်လောင်းပါ၊ အိမ်တွင်သူတို့ကိုလုပ်ပါ။ ဒါကထောပတ်သီးတစ်ဝက်၊ သံလွင်ဆီနဲ့ပျားရည်နောက်တစ်ခုနဲ့အတူကျမတို့အတွက်လုံလောက်မှာပါ။ ကျနော်တို့ကောင်းစွာရောနှောခြင်းနှင့်ဆံပင်မှတဆင့်ပြုလုပ်လျှောက်ထား။ သင်ကနာရီဝက်ခန့်ထားခဲ့ပြီးသင့်ရဲ့ဆံပင်ကိုထုံးစံအတိုင်းဆေးကြောပြီးဖယ်ရှားသင့်သည်။
ကြီးစွာသောအခြေခံအရာတစ်ခုဖြစ်သည့်ဗာဒံသီးသို့မဟုတ်အာဂင်နန်ရှိအိမ်တွင်ရှိသည့်သံလွင်ဆီအနည်းငယ်သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုသင်အမြဲတမ်းအလောင်းအစားလုပ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့ကိုသင်လိုအပ်သောရေဓာတ်ဖြည့်ပေးလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုသတိရပါ ဆံပင်အတွက်နူးညံ့မှုနှင့်ရေဓာတ်ကိုပြန်လည်ရယူလိုပါက shea butter ကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် လိုအပ်သော။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပါဝင်မှုတွေထဲမှာဗီတာမင်အီးပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်ဆံပင်အတွက်ကာကွယ်မှုကပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ် အကယ်၍ သင်သည်ဆံပင်ကောင်းကောင်းရှိပါက keratin ထုတ်ကုန်များသည်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုသတိရပါ။ ပျက်စီးသွားသော texture ကိုပြန်လည်ရယူရန်။ သူမကငါတို့အတွက်ရှုပ်ထွေးတဲ့အလုပ်အားလုံးကိုလုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ နေ့တိုင်းအဝတ်လျှော်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ cuticles ကောင်းစွာတံဆိပ်ခတ်ရန်အတွက် conditioner လိုအပ်ကြောင်းသတိရပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်၏အဝတ်လျှော်ခြင်းအလေ့အထတွင်အမြဲတမ်းမိတ်ဆက်ပေးသင့်သည်။
ငါတို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီအဆင့်တွေအားလုံးကိုသိပြီးတဲ့နောက် ပျက်စီးသွားသောဆံပင်ကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပါ့မလားဟုကျွန်ုပ်တို့တွေးမိသည်။ သင်အမြဲတမ်းပျက်စီးခြင်းမည်မျှရှိသည်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်မှာမှန်သော်လည်း၎င်းသည်အချိန်၏ ၈၅% ကျော်ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သောအလုပ်များကိုနေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြproblemနာကပိုကြီးလာရင်ငါတို့မကြိုက်တဲ့နောက်အဆင့်ကိုလုပ်ဖို့ပြောနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » ပျက်စီးနေသောဆံပင်? ဤအကြံပြုချက်များနှင့်အတူပြန်ရယူပါ
Bimba y Lola မှ Beachwear စုဆောင်းမှုကိုရှာဖွေပါ